Rakkoo Baqattoota Itiyoophiyaa Sudaan Jiranii
Bitootessa 16, 2021
Faayilii - Magaala Kaartuum. Sudaan
Baqattoonni Itiyoophiyaa Sudaan jiran haalli siyaasaa biyyattii rakkoo keessa akka isaan galche himatan. Baqattoonni waggoota digdamaa oliif Sudaan keessa jiraatan hedduun rakkoon siyaasaa biyyattii mudate hojjetanii maatii isaanii akka hin deeggarre dubbatanii, kanaaf fala UNHCR’rraa gaafannus deebii dhabnee jedhan. Baqattoonni kun UNHCR bakka balafa itti gatanitti nu gate jechuun komii qaban himataanii jiru. Kumarraa Baacaa baqattoota kana keessaa tokko.
Baqattoonni kun ka gaafatan yookaan mirgi isaanii eegaemefii akka jiraatan, yookaan carraan biyya sadaffaa akak kennamuuf yookaan ammo gara biyyaattis akka nageenyaan deebifaman gaafatan jedhe. Kana gaafatanus qaamni baqattoota kana dubbise hin jiru jedhe.
Kumarraan baqattoonni dhalooteen Itiyoophiyaa maatii 93 tahan baqattoota biyyoota shanii kaan duuka himata dhiyeeffannus UNHCR himata kana nurraa fuuchuu dhiisee, humna nageenyaa Sudaaniin fuuldura waajjira isaatii bakka hin malletti nu gatee jedhe. Aadde Saamiyaa Mohammed ganna 30 oliif Sudaan jiraatan, ijoollee afur qabu.
Isaanis UNHCR ganna hedduuf murtee male waan isaan deddeebisaa tureef baqattoota kaan duuka bahanii gaaffii kana akka gaafatan himan. Mudde 20 bara 2020 booda achii kaasanii magaalaan ala bakka balafi itti agtamutti humnootni nageenyaa Sudaan nu gatanii jedhu.
Kumarraa Baacaa baqattoonni kun Mudde keessa humnoota nageenyaa Sudaaniin garana akka fidaman dubbate. Isaan keessas daa’imman, dubartoonni fi maanguddoonni akka jiran eeree, goodaa keessa waan taheef bakkichi dubartootaaf rakkoo akka tahe hime.
Baqattoonni kun Sudaan keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef jaarmayaan UNHCR akka furmaata biyya 3ffaa nuuf kennu gaafannee jedhu.
Juuliyaa Raafayeelii sudaanitti dubbi himtuu dhaabbata baqataa UNHCR, onkoloolessa darbee kaasee baqattoonni waajjira san duratti carraa biyya sadafffaa nuuf kennaa jechuun akka qubatanii turan eeran. UNHCR amma baqattoota biyya sadaffaa isaan barbaachisu miiliyoona 1.2 ol akka gargaaraa jiru himanii isaan keessaa garuu namoota kuma 22 fi dhibba 7 qofaaf bakki argame jedhan. Kanaaf carraa biyya sadaffaa yoo mara baqattoota rakkoo cimaa keessa jiraniif laanna jedhan.
Komii baqattoonni nama himata nurraa fuudhe hin jedhus haalaanii, ammas bakka isaan jiranitti karaa waajjira dhimma keessoo Sudaan hordofaa akka jiran ifoomsan.
Fiigichi Kiiloo-meetira Shanii Tuurizimii Hawachuuf Karoorfame Baalee, Roobeetti Geggeessame
Korri Maqaa ABOtiin Gidduu Kana Finfinnee Keessatti Geggeessame Kan Seeraa Alaati, Jedha Paartichi
Itiyoophiyaan Talaalii Kovid 19 Kennuu Jalqabde
Yunaayitid Isteetis Sagantaalee Naga-eegumsaa Itiyoophiyaaf Gargaarsi Kennitu Irra-jireessi Rarraasamee Jira
Angawoonin Gameeyyiin Yunaayitid Istetis Daawwannaa Biyyoota Alaa Jalqabaaf Geggeessaniin Asiaa Daawwatan
Ameerikaan COVID-19 Ittisuu Ilaalchisee Daandii Gaarii Qabachun Himame